Madaafiic tijaabo ah oo ay rideen ciidanka AMISOM oo walwal ka abuurtay Muqadishu - Muqdisho Online
Home Wararka Madaafiic tijaabo ah oo ay rideen ciidanka AMISOM oo walwal ka abuurtay...
Madaafiic tijaabo ah oo ay rideen ciidanka AMISOM oo walwal ka abuurtay Muqadishu
Waxaa subaxdii hore ee saakay laga maqlaayay guud haan magaalada Mugadishu dhawaaqa madaafiic ay ridayeen ciidanka AMISOM. Dadka ku nool Degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir ayaa waaberigii hore ee saakay maqlayay dhawaqa Madaafiic,kuwaasi oo ka dhacayay dhanka Xeradda Xalane ee Magaalada Muqdisho.
Madaafiicdaas oo uu dahwaaqoodu aad u xooganaa ayaa la sheegayaa laga dhex ridayay Xarunta Ciidamada AMISOM ee Xalane,isla markaana ay ahaayeen kuwa Tijaabo ahaan loo ridayay.
Inkastoo Shaqaalaha ka shaqeeya Xalane shalay lagu wargeliyay in Ciidamada AMISOM ay tijaabin doonaan Madaafiic,isla markaana aysan ka naxin Tijaabadaas hadana ma jirto cid u sheegtay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa mararka qaarkood laga maqlayaa dhawaqa Madaafiic culus,kuwaasi oo aan la qoonsan halka laga soo tuuro,iyagoona geysta Khasaarooyin kala duwan iyo mid hantiyadeed.
Previous articleGen. Thomas D. Waldhauser Iyo Yamamoto oo sheegay in Maraykanka dardar galinayo duqaynta Al Shabab
Next articleMuwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika ‬